[RASMI] dr.fone - kaabta Selective Data macruufka & celi
Isku day Waxaa Free
macruufka Data Recovery ( iPhone Data Recovery )
System macruufka Recovery
Data macruufka ah ee kaabta & celi
macruufka WhatsApp Transfer, kaabta & celi
macruufka Viber kaabta & celi
macruufka KIK ee kaabta & celi
macruufka LINE kaabta & celi
macruufka Full Data Eraser
macruufka Private Data Eraser
SIM Unlock Service
macruufka Screen taariikhqorihii
Android Lock Screen raritaanka
Android Data saaridda
Kaabta Data Android & celi
Android Data masixi
Taariikhqorihii Screen Android
Tools Phone More
MobileTrans Transfer Phone
MirrorGo Android taariikhqorihii
macruufka Data Recovery
dr.fone xidhmo - kaabta Data macruufka & celi
Kaabta & Soo Celinta Data macruufka jeediyaa debecsan
Mid ka mid click in gurmad qalabka oo dhan macruufka ah in aad computer.
U ogolow in ay ku eegaan iyo gurmad ay u qalab soo celiyo shay kasta.
Dhoofin waxa aad rabto in aad ka gurmad ah in aad computer.
No xogta khasaaro on qalab inta lagu guda jiro soo celiyo.
Isku day Waxaa Free Buy Hadda
Diyaar u ah:
Isku day Waxaa Free Isku day Waxaa Free
xidhmo dr.fone - macruufka Data kaabta & celi kuu ogolaanaysaa inaad eegista gurmad iyo soo celinta wax kasta oo aad rabto in aad ka macruufka qalabka / gurmad.
xidhmo dr.fone - macruufka Data kaabta & celi kuu ogolaanayaa inaad sameeyo gurmad ah oo dhan ku dhowaad dhammaan xogta aad iPhone iyo iPad, ama aad eegista dhoofin karo xogta ah in aad rabto in aad sii on your computer. Marka waxaa loo baahan yahay, waxa kale oo aad soo celin kartaa xogta ku taageeray ilaa qalab aad doorataa alaabta aad rabto in aad. Waxa ay noqon doontaa doorasho ka khayr badan iyadoo la isticmaalayo iTunes ama iCloud.
Kaabta Your iPhone / iPad la One Click
Waxa oo dhan gurmad oo kaliya aad qaadataa hal click. Marka qalab aad ku xiran yahay oo la ogaado, barnaamijka doono xogta si toos ah gurmad on your iPhone, iPad ama iPod taabashada. The file cusub gurmad ma overwrite doonaa mid ka mid ah jirka. Waxaad samayn kartaa raad raac markasta oo aad rabto.
Uga nooc kasta oo files
Baro wax badan >>
Eeg All Features
iPhone ee kaabta iyo soo celinta jeediyaa Easy
Kaabta iyo soo celin xogta iPhone la mid click ka dib markii xira qalab aad.
iPhone ee kaabta Files aan la soo cusboonaaday
Waxaad samayn kartaa iPhone ee gurmad maalin oo dhan files raad raac ku badbaadi oo aan lagu beddeli doonaa by kuwo cusub.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iPhone ee kaabta Content
Waxaad ku eegaan kartaa faahfaahinta iPhone oo dhan files raad raac leh this gurmad macruufka iyo soo celiyo barnaamijka, si aad si fiican u maamuli kartaa gurmad iPhone.
iPhone celi ma Overwrite doonaa Your Data
Ka dib eegis ah, waxaad dooran kartaa wax kasta oo gurmad aad iPhone ee inay u soo celiso aad iPhone ama iPad. Ma bedeli doono wixii xog ah ee hadda jira on qalab aad.
Dhoofin Your Data iPhone
Haddii aad rabto in aad akhrido ama daabaco xogta aad, waxa kale oo aad dhoofin karaan waxyaabaha aad gurmad iPhone sida file HTML ama dad kale oo aad rabto. Waa in aad adigu si.
aad bay ula iPhone, iPad iyo iPod taabashada shaqee
arrinta No aad isticmaalayso ugu dambeeyay iPhone 7 Plus, iPad Pro, ama iPhone hore 4, iPad 1, this kabashada xogta macruufka si buuxda u socon kara oo dhan lagu daydo ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Tani gurmad macruufka iyo soo celiyo barnaamijka si buuxda u akhri-keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Dhoofinta Data ka kaabta Files
Sida u files raad raac ah, waxaad dooran kartaa in ay iyaga oo dhan haysato ama tirtirto kasta oo iyaga ka mid ah in aadan u baahan yihiin. Waxaa intaa dheer, in aad ku eegaan karo iyo dhoofiyaan wax waxyaabaha ka soo file gurmad ah on your computer, waxaan iyaga ku badbaadin sida faylasha HTML, CSV ama vCard.
Kaabta iyo soo celin xog ku saabsan macruufka ah qalabka si fudud.
Guarantee Security 100%
Waxa kaliya oo akhrinaya xogta, ma xog halis.
Fududaato in la isticmaalo
Waa la heli karaa in qof kasta, ma aqoon casriga weydiiyay.
No xogta khasaaro
Ma jirto xog lagu waayay gurmad, dhoofinta ama soo celin.
Data macruufka ah ee kaabta & celi Works for All macruufka ah Devices
Qalabka ay taageerayaan
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone OS, iPhone 6s More, 6s iPhone, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4
All lagu daydo ee iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad
iPod taabashada 5, iPod taabashada 4
Deymaha maqan Voice
Safari ee bookmark
App ayaa sawiro
App ayaa video
documents App ee
qaabab file Dhoofinta
xiriirada dhoofinta iyo fariimaha inay computer sida .csv, .html, ama vcard;
Dhoofinta WhatsApp farriimaha in computer sida .csv ama .html;
Dhoofinta call log, qoraalada, taariikheed, xusuusinta iyo bookmark Safari ee computer sida .html.
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10.12 (macOS Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, ama 10.6
1GHz (32 yara ama 64 yara)
256 MB ama in ka badan ee RAM (1024MB talinayo)
200 MB iyo kor boos lacag la'aan ah
macruufka 10.3, macruufka 10, macruufka 9 oo hore
Qor Review a
Barnaamijka Exellent iyo beautifull iyo aad u importaint.
Badbaadi Maalinta. Worth culeyska ee dahabka. Mahadsanid.
A waa in uu leeyahay haddii aad dhahnaa xogta laga badiyay!
wax soo saarka Perfect shaqeeya weyn u iphone ah.
Talooyin & Tricks
3 Siyaabaha la isu Notes kaabta on iPhone iyo iPad
Waa maxay macnaha iTunes ee kaabta?
Sida loo soo celiya ee kaabta WhatsApp on iPhone iyo qalabka Android
Laba Siyaabaha iCloud Xiriir kaabta
Sida loo Data on xirantay iPhone 7 (Plus) / SE / 6s (Plus) / 6 kaabta
Sida loo soo celi ka kaabta iTunes
iPhone ee kaabta shawladda: soosaaray ceshan Data iPhone
4 Methods in ay iPhone Xiriir kaabta la / aan iTunes
Sida loo Helo iPhone Location kaabta iyo Delete hayaan
Macaamiisha Our Ma Sidoo kale Saarashada:
Xaliyo arrimaha kala duwan ee macruufka nidaamka sida hab dib u soo kabashada, Apple logo cad, shaashadda madow, dabamariyey on bilowga, iwm
Kabsado xiriirada lumay ama la tirtiro, fariimaha, sawiro, qoraalo, iwm ka iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
WhatsApp Transfer, kaabta & celi
Bedelka macruufka WhatsApp in ay iPhone / iPad / iPod taabashada / qalabka Android, ama gurmad / u dhoofinta kombiyuutaro.